Soo saaraha Realme wuxuu soo bandhigi doonaa Android-kii ugu horreeyay ee leh teknolojiyadda MagSafe | Wararka IPhone
Apple wuxuu soo saaray tikniyoolajiyadda 'MagSafe' ee gacanta iPhone 12, oo ah nidaam xukun magnetic in ayaa si xishood la’aan ah u soo guuriyeen soo saaraha Realme waxaana loogu magac daray MagDart. Ogeysiintaani maahan mid ku timid xan, tan iyo markii uu agaasimaha guud ee shirkadda, Madan Sheth uu xaqiijiyay warkan. iyada oo loo marayo tweet.
Waxyar kadib, wakaaladaha isgaarsiinta ee lashaqeeya Realme, waxay soo direen emayl xaqiijinaya in Talaadada soo socota, Ogosto 3, Realme ay ku soo bandhigi doonto munaasabada dhacdadii ugu horreysay ee xeedho magnetic wireless ah ee loogu talagalay Android. Innovation Magnetic realme.
Marka loo eego sawirrada ay heleen GSMArena iyo Gizmochina, the MagDart waxaa lagu heli doonaa laba nooc. Midka hore waa cajalad aad ugu eg xarkaha rasmiga ah ee Apple ee MagSafe oo waxay bixisaa awood xukun oo gaaraya ilaa 15W.
Qaabka labaad ayaa ah Waxaan muujinayaa inay ku jirto taageere si loo ilaaliyo heerkulka qalabka markasta. Soo noqoshada, waxay bixin doontaa nidaam awood badan oo awood leh, sida ay shirkaddu sheegtay, "waxay la tartami doontaa tikniyoolajiyadda xarkaha fiilooyinka degdegga ah."
Labada moodel xeedho la jaan qaadi doona Realme Flash, Taleefanka casriga ah ee soo socda ee ay shirkaddu qorsheyneyso inay ku soo bandhigto suuqa oo ay u badan tahay in si wada jir ah loogu soo bandhigi doono MagDart, maadaama haddii kale aysan waxtar lahayn in la soo bandhigo xeedho magnet ah oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee aan weli suuqa ku jirin.
Sannadkii hore, soo saaruhu wuxuu soo saaray xeedho 125W SuperDart ah, aalad awood u leh inay ku soo rogto taleefannada casriga ah daqiiqado yar gudahood. Anigu sifiican uma fahmi karo waallida qaar ka mid ah soo saarayaasha si ay qalabkooda shiiliyaan waqti ka hor waqtiga oo ku saleysan eedeymaha degdegga ah. Qofna ma seexdo habeenkii? Qofna ma soo dalici karaa taleefankiisa casriga ah inta uu la seexanayo xeedho 5w sida caadiga ah si aanu ugu dhibaatoonin batteriga? Sikastaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Soo saaraha Realme wuxuu soo bandhigi doonaa Android-kii ugu horreeyay ee leh teknolojiyadda MagSafe
Sarrayso faalladaadii ugu dambaysay.
Waa waxa aan had iyo jeer idhaahdo. Waa maxay baahida loo qabo in mobiilka lagu soo dallaco habeenkii xawaare ka sarreeya 5w -1A sida bakhaarada nolosha oo dhan?
Uma baahnid inaad kululaysid oo aad baabi'isid batteriga degdegga u dallaca habeenkii adiga oo lacag buuxa ah marka ay saacado kaa horreeyaan.
Waqtigaan la joogo Apple waa inay ikhtiyaar u dhigtaa inay ku soo dallacdo iPhone habeenkii si otomaatig ah si ay hoos ugu dhigto.
"Maanta Apple" wuxuu ku barayaa sida loo qaado sawirrada habeenka ah ee fiidiyoowga ah ee fiidiyowga ah
Mar dambe suurtagal maahan in hoos loo dhigo iOS 14.6